Umnikelo weConstantine (uDonatio Constantine, okanye ngamanye amaxesha u-Donatio nje) ungomnye wemisebenzi eyaziwa kakhulu kwimbali yaseYurophu. Ingxelo yesikhokelo ebonisa ukuba ibhaliwe ekuqaleni kwekhulu lesine, inika indawo enkulu yomhlaba kunye negunya lezopolitiko, kunye negunya lezenkolo, kuPapa uSyvester I (ngamandla ukusuka ku-314 ukuya ku-335) kunye nabaphumelelayo. Kwakuyimpembelelo encinci emva kokuba ibhaliwe kodwa yakhula yaba nefuthe elikhulu njengoko ixesha liqhubeka.
Asiqinisekanga ukuba ngubani owenzela uMnikelo, kodwa kubonakala ngathi ubhaliwe c. 750 ukuya kwi-8.8 ngeLatin. Inokuthi ifakwe kwi-coronation yePippin eFutshane ngo-754, okanye i-coronation ekulukazi yase-Charlemagne ngo-800, kodwa yayinokuba lula ukunceda iimpapa zokuzama ukujongana nemingeni ye-Byzantium yokomoya kunye neye-Italy. Enye yeembono ezithandwayo kakhulu i-Donation idalwe phakathi kwekhulu lesibhozo kwinqanaba likaPapa uStephen II, ukuze incedise ingxoxo yakhe nePepin. Ingcamango yayikukuba uPapa wavuma ukutshintshwa kweso sithsaba esikhulu saseYurophu kwiMerovingian ubukhosi baseCarolingians, kwaye ngokuphindaphindiweyo, u-Pepin akayi kunika iPapa amalungelo kuphela kumazwe aseNtaliyane, kodwa ngokuqinisekileyo 'yayiza kubuyiselwa' into eyayinikezwe kudala uConstantine. Kubonakala ukuba iindaba zeNkokeli okanye into efana nayo yayihamba ngeenxa zonke kwiindawo ze-Yurophu ukususela ngekhulu lesithandathu kwaye bonke abayidalayo babevelisa into ebelindelekileyo ukuba babekhona.
Umnikelo uqala ngendaba: indlela uSyvester I kwakufuneka ukuba yiphilise ngayo uMlawuli waseRoma uConstantine weqhenqa ngaphambi kokuba umxhasi anike inkxaso yakhe eRoma kunye nePapa njengentliziyo yecawa. Emva koko uhamba ekunikezeni amalungelo, 'umnikelo' ebandleni: uPapa unikwe umlawuli onqulo ophezulu weentloko ezinkulu - kuquka neConstantinople esanda kwandisa - kwaye unike amandla onke amazwe anikezelwa kwibandla kulo lonke ubukhosi bukaConstantine .
UPapa uphinde unikezwe kwiNdlunkulu yaseMakedoniya eRoma kunye nobukhosi basentshona, kunye nokukwazi ukumisela bonke ookumkani kunye nabalawuli abalawulayo apho. Oko kwakuthetha ntoni, (ukuba bekuyinyaniso), ukuba iPapa yayinelungelo elingokomthetho lokulawula indawo enkulu yaseItali ngendlela yelizwe, eyayenza ngexesha lexesha elide.
Nangona ziqulethe inzuzo enkulu kumapapa, uxwebhu lubonakala lukhohliwe kwiinkulungwane ze-9 kunye neyeshumi, xa iingxaki phakathi kweRoma kunye neConstantinople zixhaphazele ngaphezu kobani ophezulu, kwaye xa i-Donation yayiyiluncedo. Kwakungekho u-Leo IX kwinqanaba leshumi elineshumi elinanye apho uMnikelo wawucatshulwa njengobungqina, kwaye ukususela ngelo xesha kwaba yinto eqhelekileyo kumzabalazo phakathi kwecawa kunye nabalawuli belizwe ukuba baveze amandla. Ukusemthethweni kwakungathandabuzeki, nangona kwakukho amazwi aphikisayo.
I-Renaissance Destroys the Donation
Ngo-1440 i- Renaissance Humanist ebizwa ngokuba nguValla yashicilela umsebenzi owawunqamle uMrhumo phantsi waza wawuhlola: 'Ingxoxo kwiNgxowa-mali yokunikezelwa kweConstantine'. U-Valla wasebenzisa ukugxeka okubhaliweyo kunye nomdla kwimbali nakwii-classics ezikhulile kangaka ezibonakalayo kwi- Renaissance ukuba zibonise, phakathi kokugxeka amaninzi nakwiindlela ezihlaselayo esinokuthi singaziqwalasela ezi zifundo kule mihla, ukuba uMrhumo wabhalwa kwixesha elizayo-ukuqala , isiLatini esivela kwiminyaka emininzi emva kokuba iMinikelo ibhalwe phantsi-kwaye ke yabonisa ukuba kwakungekho yekhulu lesine.
Emva kokuba uValla eshicilele ubungqina bakhe, uMnikelo wawubonakala ngokugqithiseleyo, kwaye icawa ayinakuyithemba. Ukuhlaselwa kukaValla kwi-Donation kuncede ekukhuthazeni ukufundelwa kwabantu, kunceda ukuphazamisa amabango ebandla ongeke ukwazi ukuphikisana nayo kwaye, ngendlela encinci yanceda ekukholeni kwiNguqulelo .
Yiyiphi iLect in Studies Languages?
'Izabelo zeSondo kunye neCandelo leSixeko'